Gudoomiyaha Ceelwaaq oo Qarax Lagu Dhaawacay. – SBC
Gudoomiyaha Ceelwaaq oo Qarax Lagu Dhaawacay.
Posted by SBC Editor on May 3, 2015 Comments
Gudoomiyaha Degmada Ceelwaaq ee Maamulka Gobolka Gedo Ibraahim Guuleed Aadan (Kajigo), ayaa waxaa gelinkii dambe ee maanta dhaawaciisa loo qaaday Gobolka Waqooyi Bari Kenya, si xaaladiisa caafimaadeed wax looga qabto.
Gudoomiyuhu wuxuu ku dhaawacmay qarax culus oo ka dhacay maqaaxi ku taala Degmada Ceelwaaq, iyadoo maqaaxida la beegsaday uu fadhiyay Gudoomiyaha Degmada Ceelwaaq Ibraahim Guuleed Aadan (Kajigo).
Qaraxan oo ahaa mid si weyn looga maqlay gees ka gees Degmada Ceelwaaq, ayaa waxa uu dhaawac culus ka soo kala gaaray ugu yaraan lix ruux. Dadka dhaawacmay waxaa ka mid ah saddex ka mid ah ilaalada Gudoomiyaha iyo laba ruux oo shacab ah.
Faarax Macalin Bishaar oo ka mid ah Saraakiisha Ciidanka Dowladda ee Gobolka Gedo, ayaa sheegay in dhaawaca Gudoomiyaha loo qaaday dalka Kenya, markii Gobolka Gedo waxba looga qaban waayay.
Faarax Macalin Bishaar, ayaa dhaawaca Gudoomiyaha ku sheegay mid dhexe, isagoona meesha ka saaray in xaaladiiisu tahay mid aad u garaab ah.
Bishaar, ayaa waxa uu Ururka Al Shabaab uu ku eedeeyay mid ka masuul ah qaraxii uu ku dhaawacmay Gudoomiyaha, wuxuuna taasi sabab kaga dhigay iyadoo aanu Gudoomiyuhu lahayn cadow, aan Al Shabaab ahayn.
Hawlgal ballaaran oo laga sameeyay Degmada Ceelwaaq, ayaa waxaa la soo sheegayaa in dad lagu soo qab qabtay, iyadoo baaritaanana ay soconayan.